नेकपा एकता: सात महिनापछि सात प्रदेश कमिटीले पायो पूर्णता, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेकपा एकता: सात महिनापछि सात प्रदेश कमिटीले पायो पूर्णता
काठमाडौंं। पार्टी एकीकरण भएको सात महिनापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सात प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यको टुंगो लगाएको छ। सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार सातवटै प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यको टुंगो लागेको हो।
नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले सोमबार सातवटै प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यको नामावली सार्वजनिक गरेका छन्। मंसिर १२ गते बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले प्रदेश कमिटी सदस्यको नामावलीलाई अन्तिम रुप दिएको थियो। तर नाम सार्वजनिक भने भएकोे थिएन । प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाए पनि प्रदेश कमिटीका सदस्यको नाम टुंगो लाग्न सकेको थिएन।
पार्टी एकता भएको सात महिनापछि पूर्वएमाले र पूर्वनेकपा माओवादी केन्द्रको भागवण्डाको आधारमा प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यहरुको नामवाली टुंगो लागेको छ । प्रदेश नम्बर १ मा २०७ सदस्यीय प्रदेश कमिटी बनेको छ। जसमा पूर्वएमालेका तर्फबाट १ सय २२ र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ८५ सदस्य रहेका छन्।
त्यसै गरी प्रदेश नम्बर २ मा २ सय १५ जनाको प्रदेश कमिटी गठन भएको छ । जसमा त्यसमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबाट समान १ सय ६ जना रहने छन् भने पार्टी एकतापछि प्रवेश गरेका ३ जनालाई समेत कमिटीमा ल्याइएको छ ।
प्रदेश नं ३ मा तत्कालीन एमालेबाट १ सय १६ र माओवादी केन्द्रबाट १ सय १ गरी कुल २ सय १७ सदस्यीय प्रदेश कमिटी रहेको छ । यस्तै गण्डकी प्रदेश कमिटीको संख्या १ सय ८७ रहेको छ । जसमा पूर्व एमालेका तर्फबाट १ सय २ र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ८५ जना सदस्य रहेका छन् ।
महासचिव पौडेलद्वारा सार्वजनिक नामावलीअनुसार प्रदेश नं ५ को कमिटी २ सय ३ सदस्य रहेकोे छ । जसमा पूर्वएमालेको तर्फबाट १ सय ६ र माओवादी केन्द्रका ९७ सदस्य छन् ।
त्यसै गरी नामावलीमा कर्णाली प्रदेशमा १ सय ७५ सदस्यीय प्रदेश कमिटी बनेको छ । जसमा पूर्वएमालेको तर्फबाट ८७ र माओवादी केन्द्रका ८८ जना रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी १ सय ८३ सदस्यीय बनेको छ । त्यसमा तत्कालीन एमालेबाट १ सय र माओवादी केन्द्रबाट ८३ जना रहेका छन् ।
सात महिनापछि प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी र प्रदेश सदस्यको नाम टुंगो लगाए पनि नेकपाले ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनको काम अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन । पटक–पटक सचिवालयको बैठक बसे पनि जिल्ला कमिटीको एकता प्रक्रिया भने अन्योलमा परेको छ ।
नेकपाभित्र स्थायी समितिको बैठकमार्फत प्रदेश कमिटीका सदस्यको नामवलीको बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने आवाज उठेपनि सचिवालयको बैठककै आधारमा नामावली सार्वजनिक भएको छ । नेकपाभित्र आन्तरिक गुटबन्दीको कारण पार्टी एकता प्रक्रिया लम्बिँदै आएको छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिक